Izindaba - Ngo-2026, imakethe yezitshalo zokuhlukanisa umoya emhlabeni izobona ukukhula okukhulu
Ngo-2026, imakethe yezitshalo zokuhlukanisa umoya emhlabeni izobona ukukhula okukhulu
I-DBMR ingeze umbiko omusha obizwa nge- "Air Separation Equipment Market", oqukethe amatafula emininingwane yeminyaka nokubikezela. Lawa mahebula wedatha amelwe "yingxoxo namagrafu" asakazwa ekhasini futhi kulula ukuwaqonda ngokuhlaziya okuningiliziwe. Umbiko wokucwaninga wemishini yokuhlukanisa umoya unikeza ukuhlaziywa okuyisisekelo kwezimo zemakethe zabakhiqizi bemishini yokuhlukanisa umoya, kufaka phakathi usayizi wemakethe, ukukhula, isabelo, izitayela, kanye nezakhiwo zezindleko zemboni. Lapho sisungula le makethe yomhlaba, kufanele sigxile ohlotsheni lwemakethe, isikali senhlangano, ukutholakala kwasendaweni, uhlobo lwenhlangano yomsebenzisi wokugcina, nokutholakala kwemibiko yemakethe yemishini yokuhlukanisa umoya eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, e-Asia Pacific naseMiddle East kanye ne-Afrika. Ukukhula kwemakethe yemishini yokuhlukanisa umoya kuqhutshwa ngokukhula kwemali esetshenzisiwe ye-R & D yomhlaba, kepha isimo sakamuva se-COVID nokwehla kwezomnotho sekuyiguqule amandla emakethe ephelele.
Ucwaningo lwemakethe yemishini yokuhlukanisa umoya lunikeza amakhasimende imiphumela emihle kakhulu, futhi lo mbiko ukhiqizwa ngokusebenzisa izindlela ezihlanganisiwe nobuchwepheshe bamuva. Ngalo mbiko wemakethe, kulula ukusungula nokwenza ngcono isigaba ngasinye somjikelezo wempilo yezinqubo zezimboni, kufaka phakathi ukubamba iqhaza, ukuthola, ukugcinwa nokwenza imali. Umbiko wemakethe wenze ukuhlaziywa okuphelele kwesakhiwo semakethe futhi kwahlolwa izingxenye ezahlukahlukene zemakethe kanye nezingxenyana ezingaphansi komkhakha. Ukungasho, amanye amashadi asetshenziswe ngempumelelo embikweni wesitshalo sokuhlukanisa umoya ukwethula amaqiniso nedatha ngendlela eyiyo.
Phakathi kwabancintisana abakhulu abasebenza manje emakethe yezitshalo ezihlukanisa umoya, bambalwa i-Air Liquide (France), iLinde (Ireland), iPraxair Technology Co, Ltd. (UK), Air Products Co, Ltd. (USA), Messer Group Co, Ltd. (Germany), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japan), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Canada), Technex, Astim (Europe), Bd | I-Sensors GmbH (Germany), Toro Equipment (Europe), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Germany), Instrument & Supply, Inc. (I-United States ), Jbi Water and Wastewater (United States), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (United States), Eco-Tech, Inc. (United States), Rcbc Global Inc (Germany) nezinye izinkampani.
Imakethe yemishini yokuhlukanisa umoya kulindeleke ukuthi ikhule isuka enanini lokuqala elilinganisiwe le-USD 3.74 billion ngo-2018 iye kunani elilinganisiwe le-USD 5.96 billion ngo-2026, ngenani lokukhula lonyaka eli-6% ngesikhathi sesimo sezulu sika-2019-2026. Ukwanda kwenani lemakethe kungabangelwa isidingo esandayo semikhiqizo ye-photovoltaic neziteshi zokubonisa i-plasma.
Ukuze ikakhulukazi baqonde Dynamics emoyeni imishini imishini ngokwahlukana emakethe, sahlaziya global imishini imishini ngokwahlukana emakethe ezifundeni ezinkulu zomhlaba.
Ubhadane lwe-COVID-19 seludale izingqinamba kuwo wonke umkhakha wepayipi, iziteshi zokuthengisa nemisebenzi ye-supply chain. Lokhu kufake ingcindezi yesabelomali engakaze ibonwe ekusetshenzisweni kwenkampani ngabaholi bezimboni. Lokhu kwandisa isidingo sokuhlaziywa kwamathuba, ulwazi lwamanani entengo kanye nemiphumela yokuncintisana. Sebenzisa ithimba le-DBMR ukudala iziteshi ezintsha zokuthengisa futhi ungene ezimakethe ezintsha ezazingaziwa ngaphambili. I-DBMR isiza amakhasimende ayo ukuthi athuthuke kulezi zimakethe ezingaqinisekile.
Isikhathi Iposi: Oct-13-2020